पल प्रकरण : नाबालिग गायिकाको सर्मथनमा बोल्न थाले अभिनेत्रीहरू, रेखापछि ऋचाले गरिन् सर्मथन – Nep Stok
फागुण १७, २०७८ मंगलबार 379
काठमाडौं, १७ फागुन । नाबालिग गायिकाको उजुरी परेपछि अभिनेता पल शाह न्यायिक हिरासतमा छन् । उनी तनहुँ प्रहरीको न्यायिक हिरासतमा छन् । तर, पीडित नाबालिग नायिकाको पक्षमा अभिनेत्रीहरू बोल्न थालेका छन् ।
‘२० वर्षमुनिका छोरीहरु बालिका हुन् । बालिका कानुनतः सबै प्रकारका सुरक्षा र अभिभावकत्व प्राप्त गर्ने अधिकार राख्दछन् । समाजको भूमिका उनीहरुलाई संरक्षाण गर्ने हो,’ आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा अभिनेत्री रेखा लेख्छिन्, ‘को सँग लभ छ ? कति पटक यौन सम्पर्क भयो ?
Prevपलको हातमा हत्कडी लागेपछि थामिएन पुजाको आशुँ, तनुह जादै पूजा…..(भिडियो सहित)
Nextसुनको मूल्य घट्यो, तोलाको कति ?
जापानबाट आयो लाखौं नेपाली खुसी पार्ने खबर, अब जापानले..